तहस-नहस पार्ने गरी नेपालमा पहिलो पटक आएको "टोर्नाडो" के हो ? फेरी आउने सम्भावना छ की छैन ?
काठमाडौँ- कयौंको मृत्यु र कयौंको घर-बार उजाडीने गरी गत आइतबार बारा र पर्सामा चलेको भिषण हावाहुरी ‘टोर्नाडो’ भएको पुष्टि हुन आएको छ।
नेपाल विज्ञान तथा माैसम विज्ञानल विभागले बारा-पर्सामा चलेको हुरी ‘टोर्नाडो’ भएको पुष्टि गरेको हो। जसलाई पुष्टि गर्दै विभागले शुक्रबार एक प्रेस विज्ञाप्ती जारी गरेको थियो।
जल तथा मौसम विज्ञान विभाग र द स्मल अर्थ नेपालले गरेको संयुक्त अध्ययनको क्रममा बारा र पर्सामा आएको हावहुरी ‘टोर्नाडो’ भएकाे तथ्य खुलेको हो।
विभागले,”जल तथा मौसम विज्ञान विभाग र द स्मल अर्थ नेपालले गरेको संयुक्त अध्ययनबाट अनुसन्धानले बारा र पर्सामा आएको हावहुरी ‘टोर्नाडो’ भएकाे तथ्य पत्ता लागेको हो ।” भन्दै सो बारे पुष्टि गरेको छ।
अनुसन्धानको क्रममा विज्ञहरुले भूउपग्रह मार्फत खिचिएका तस्विरहरुको अध्ययन गरेपश्चात ‘टोर्नाडो’ आएको निष्कर्षमा संयुक्त अनुसन्धान टोलि पुगेको हो।
सेन्टिनियल नामको भूउपग्रहले त्यो बेला नेपालको बारा, पर्सामा विपत्तिको भोलिपल्ट १०मिटर उचाइँबाट खिचेका तस्बिरको अध्ययनपश्चात् ‘टोर्नाडो’ नेपालमा आएको पुष्टि भएको नेपाल विज्ञान तथा माैसम विज्ञानल विभागले जनाएको छ।
विभागका अनुसार नेपालमा यसप्रकारको टोर्नाडो आएको भएता पनि जल तथा मैसम विभागमा यसबारे कुनै रेकर्ड छैन। विनाशाकारी आँधी ‘टोर्नाडो’ बारे वैज्ञानिकसहितको स्थलगत अनुसन्धानको खाँचो रहेको भन्दै विज्ञप्तिमा,”यस्ता प्रकारका अति विमाशकारी मौसमी घटनाको विस्तृत जानकारीका लागि वैज्ञानिकसहितको स्थलगत अनुसन्धानको खाँचो रहेको छ ताकि भविष्यमा यस्ता प्रकारका घटनाको पूर्व सूचना प्रवाह गरि उपयुक्त सतर्कता अपनाउन पुगोस् ।” उल्लेख गरिएको छ।
‘टोर्नाडो’ विनाशाकारी आधिहुरीकाे एक प्रकार हो। ठूलै संरचना पनि उखेल्ने, उडाउने र सोहोरेर लैजाने तागत भएको ‘टोर्नाडो’ नेपालीमा ‘हुण्डरी’ भनेजस्तै तिव्र गतिकाे आधि हो। ‘टोर्नाडो’ आएको ठाउँ पूरै ध्वश्त नै हुने सम्भवना रहन्छ। विशेष गरेर अमेरिकी देशरूमा आउने ‘टोर्नाडो’ नेपालमा भने दुर्लभ नै मानिन्छ।
टोर्नाडो आउँदा सुख्खा हुरीसहितको बादल र पानी भएको बादल गर्जदै चट्याङ, असिना पर्ने अनि सँगै कडा आँधीको सिर्जना हुन्छ। फैलिएको आकारबाट खुम्चिदै तल सानो क्षेत्रमा कडा भार सिर्जना हुन्छ। अथवा आकाशबाट बादलसहितको वायु सोली आकारमा धर्तीमा केन्द्रित हुन्छ।
बाहिर बादलको घेरा र भित्र हावाको न्यून चाप हुने हुँदा यसले छोएका हरेक भौतिक वस्तु उखेलिन्छ। टोर्नाडो परेको ठाउँका पक्की घरसँगै रूख, ठूला सवारी साधन, भौतिक संरचना सबै उखेलिने,उड्ने र सोहोरिने हुन्छ।
नेपालमा टोर्नाडो आउने सम्भावना कति ?
मौसमविदहरुका अनुसार यस प्रकारको विनाशाकारी ‘टोर्नाडो’ उच्च आद्रता भएको वायु, उच्च तापक्रम भएको वायु र चिसो वायु तिब्र गतिमा ठोक्किँदा आउने गर्छ। नेपालकै भूभागमा समुन्द्र नरहेको हुँदा यस प्रकारको प्राकृतिक अवस्थाको निर्माण हुने सम्भावना कमै हुन्छ। तर दुर्लभ परिस्थितिमा भने टोर्नाडो आउन सक्छ।
प्रकाशित : शनिबार, चैत २३, २०७५१४:५२